Editor – Page 52 – ShwePyiAye
သရုပ်ဆောင် ထက်အောင်ရှိုင်း ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သံသယဖြစ်ဖွယ်လူနာအဖြစ်ကုသမှုခံယူ
သရုပ်ဆောင် ထက်အောင်ရှိုင်း ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သံသယဖြစ်ဖွယ် လူနာအဖြစ် ကုသမှုခံယူ နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်မင်းသားချော အောင်လေးကတော့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မော်ဒယ်မင်းသားချော ထက်အောင်ရှိုင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို စိတ်ပူနေရှာတဲ့အကြောင်းကို “အမြန်သက်သာပါစေညီလေးရေ. မထင်ထားဘူးဒီရောဂါကြီးမင်းထိပ်ဆုံးကဖြစ်လိမ့်မယ်လို့” လို့ သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ထက်အောင်ရှိုင်းတစ်ယောက် […]
ဆေးရုံက ဆင်းတာနဲ့ စိတ်မချလို့ အစာပိုက်တန်းလန်း နဲ့ ဗေလုဝ ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ခဲ့တဲ့နေရာလေးတစ်ခု
နာမည်ကျော် ဟာသ သရုပ်ဆောင်လူရွှင်တော် ဗေလုဝဟာ ဦးနှောက်သွေးကြောခဲတဲ့ ဝေဒနာကြောင့် ဆေးရုံမှာ တက်ရောက်ကုသမှုခံခဲ့ရပါတယ်…. ဒါကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာ လူတွေကို မသိတော့ဘဲ နေတိုးနာမည်တစ်ခုကိုပဲ ခေါ်နေခဲ့လို့ ပရိသတ်တွေက စိတ်ပူခဲ့ကြတာပါ….နောက်ပိုင်း ဆေးကုသမှုတွေ ခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အခုဆိုရင် ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေ […]
Voting စနစ်နဲ့ ရွေးချယ်တာဟာ မမှန်ကန်ဘူး တကယ့်အရည်အချင်းမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ ဆုပန်ထွာ
“ပန်ပန်”လို့ ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ မင်းသမီးချော ဆုပန်ထွာကတော့ လတ်တလောမှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် (၂၀၂၀) ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီပန်းကိုင် ရွှေကြိုရွေးချယ်ပွဲမှာ ဒိုင်တစ်ဦးအနေနဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီနှစ်ရဲ့ ရွှေကြိုရွေးချယ်မှုမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို အိုက်တင်တွေပါ ပြုလုပ်ခိုင်းပြီး စစ်ဆေးသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ရဲ့ […]
ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ မေသန်းနုရဲ့ မွေးနေ့မှာ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ဇင်ယော်မောင်မောင်
ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ(၂၇)ရက်နေ့လေးကတော့ မေသန်းနုရဲ့(၅၉)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မေသန်းနုကတော့ ဟိုးအရင်အချိန်တွေကတည်းက အောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုရလဒ်အနေနဲ့အကယ်ဒမီဆုကြီး ငါးဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူချစ်မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်လာခဲ့ပေမယ့် မကြာသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတစ်ခုကြောင့် ရန်ကင်းတရားရုံးကနေ ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကတော့ များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူ ဇင်ယော်မောင်မောင်နဲ့ သားလေးမင်းသန့်မောင်မောင်တို့ကတော့သားလေးရဲ့ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ […]
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လူနာတစ်ဦး ပထမဆုံး စတင်ကုသပျောက်ကင်း
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာတစ်ဦး ပထမဆုံး စတင်ကုသပျောက်ကင်း ဝူဟန်မြို့ကို ဗဟိုပြု၍ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စတင်ပျံ့နှံ့ပြီး နောက် ပထမဆုံး လူနာတစ်ဦး ကုသပျောက်ကင်း၍ ဆေးရုံမှ ဆင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ရှန်ဟိုင်း မြူနီစီပယ် ကျန်းမာရေးကော်မရှင်က ပြောကြားသည်။ချန်ဟုခေါ်သော အသက် (၅၆)နှစ်အရွယ် […]
မွေးနေ့မှာမိဘနှစ်ပါးကို သိန်းရာချီကန်တော့ခဲ့တဲ့ အောင်လေး
နိုင်ငံကျော် မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် အောင်လေးကတော့ ဇန်နဝါရီလ(၂၆)ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ အသက်(၂၈)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ရက်မြတ်မှာတော့ ရရှိခဲ့တဲ့အနုပညာကြေးလေးတွေနဲ့ အင်းစိန်ဆေးရုံးမှာ လူနာအယောက်တစ်ရာစာအတွက် ထမင်းဗူးနဲ့ငွေသားတွေကိုလည်း လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ သူဟာ (၂၀၂၀)နှစ်သစ်စစချင်းမှာပဲ ဧရာဝတီဘဏ်မှ နှစ်သစ်လက်ဆောင်အဖြစ် မဲဖောက်ပေးတဲ့ SUZUKI ကားသစ်လေးကို မဲပေါက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အောင်လေးကတော့ နှစ်သစ်မှာမဲပေါက်ခဲ့တဲ့ […]
မြင့်မြတ်နဲ့အတူ ပြင်ဦးလွင်မြို့ကိုအလည်လိုက်လာရတာကို ပျော်ရွှင်နေတဲ့ဂျူနီယာမြင့်မြတ်လေး …
By EditorPosted on January 26, 2020
မင်းသားချောလေး မြင့်မြတ်ကတော့ ပရိသတ်တွေအပေါ်မှာ ရင်းနှီးဖော်ရွေစွာ ဆက်ဆံတတ်တာကြောင့် အားလုံးကချစ်ခင်အားပေးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ဇာတ်ရုပ်ပီပြင်အောင် ဖန်တီးနိုင်တဲ့မြင့်မြတ်က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို လက်ခံရိုက်ကူးနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်က အကယ်ဒမီဆုလည်း ဆွတ်ခူးခဲ့ရပြီဖြစ်သလို ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုလေးကိုလည်း ရရှိထားပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။မြင့်မြတ်က […]
ဝူဟန်ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် စတွေ့ပြီလို့ မြန်မာ အစိုးရကကြေငြာလိုက်တာနဲ့ ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်လဲ ဆိုတာ
ဝူဟန်ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် စတွေ့ပြီလို့ မြန်မာ အစိုးရကကြေငြာလိုက်တာနဲ့ ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်လဲ ဆိုတာ ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်ပေးပါ ကျေးဇူးပြုပြီး တခြားမသိသေးသူများအတွက်လည်း ရှယ်ပေးပါ မိမိအနေနဲ့ မြို့မှာနေတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားအနေနဲ့ လေဆိပ်တွေ ဘူတာရုံတွေ ကားဂိတ်တွေ ကိုစရှောင်ဖို့လိုတယ်.. ဖြည်းဖြည်းနေပါ.. […]